Ny anton’izany dia noho ny fisolokiana izay mitentina an-tapitrisany maro. Afaka nody anefa io olom-boafidy izay lany « mandat » io omaly rehefa nampanantena fa hamerina ny volan’olona. Na izany aza dia tsy maintsy hiakatra ny raharaha satria tsy azo tazomina intsony rehefa mipetraka ny fitoriana.
OMENA 20 TAPITRISA ARIARY
Omena roapolo tapitrisa ariary izay mahita an’i Del sy Tersa izay voarohirohy ho atidoha nikotrika ny kidnapping nisesy tao Tsaratanàna. Ankoatr’izay dia nisy manamboninahitra ambony eo anivon’ny zandary izay nosamborina koa ary tazomina etsy amin’ny zandary etsy fiadanana noho ny firaisana tsikombakomba amin’ireo jiolahy mpaka an-keriny. Mbola hisy manam-pahefana hosamborina koa miaraka amin’ny mpandraharaha ato ho ato.
OLON-TSOTRA SY NY ZANDARY
Manomboka misy vokany ilay fahafahan’ny olon-tsotra mandefa mailaka sy miantso an-telefaonina eo anivon’ny birao miandraikitra ny tsy mety hataon’ny zandary. Vokatr’izany dia mpitandro filaminana roa teo anivon’io vondrona io no nidoboka am-ponja tany Morafenobe sy Bemarivo noho ny fakàna an-keriny ny iray ary fikasihan-tànana olona hatao fanadihadiana ny faharoa.
HIHATAHAN’NY MAPAR I ROSSY
Manomboka hihatahan’ny Mapar ny depiote teo aloha Rossy. Ny anton’izany dia tsikaritr’izy ireo fa lasa sarotra ny miresaka amin’ity mafana fon’io antoko io teo aloha ankehitriny. Izy rahateo dia efa manao eson-teny maivana amin’ny tambajotra sosialy ankehitriny ary toa te-hiteny fa tsy faly tamin’ny tsy nijerena azy akaiky rehefa azon’ny filoha ny toerana. Hatreto tokoa dia izy no niady maina fotsiny.
Sovazy tanteraka. Izay no azo hilazàna ny mpianatra eny anivon’ny oniversite sasany ankehitriny. Toa ireo izay eny Vontovorona izay manao fitakiana tsy maintsy arahina herisetra hatrany. Tonga hatramin’ny fanipazana kodiarana mirehitra sy fitorahana vato ny teny an-toerana omaly. Ireo tanora aza moa dia lasa niady an-trano tao anatiny ary nisy ny naratra mafy poaka maso vokatr’izany. Hatramin’ny mpanao gazety dia voatora-bato.
Tezitra mafy amin’ny tale jeneralin’ny Jirama ireo mpiasa ary nanapa-kevitra ny tsy hanaraka ny baikony intsony ary hanao fitokonana faobe manomboka amin’ny zoma hoazy izao. Nolazain’ny sendka fa tsy mamaly ny fitakian’ny mpiasa ny tale jeneraly, indrindra mahakasika ny mpiasa izay nesorina tao amin’ny orinasa ka mbola tsy naverina. Efa karazan’olona izay ny tale jeneraly sy minisitra izay misahana ity orinasam-panjakana ity. Vahaolana ve ny olona ?
Mbola vitsikely ny manatitra ny pasipaoro diplaomatika eny anivon’ny minisiteran’ny raharaham-bahiny hatreto. Tsy taitra ny hamerina ny olona no koa ny ankabeazan’ireo nahazo fampiatoana dia tsy mbola eto Madagasikara amin’izao fotoana. Hatreto dia tsy tena azon’ny olona loatra ity fepetra ity satria na manana pasipaoro maintso aza ka rehefa tsy misy ny taratasy manamarina ny iraky ny fanjakana dia tsy manan-kery izany.